Isantya esiphakamileyo soPhahla lwePaneli yokuSebenzisa uMatshini
Iphepha le-Metal Sheet
Ingqele esongwayo Ribbing Machine
Zenzekelayo Machine Link Fence Machine
IINKCUKACHA ZOKUTHUNYELWA - UMGANGATHO WOKUSIKA IIPHEPHA
ngomphathi ku 2021-06-02
I-SHANGHAI COREWIRE INDUSTRY CO., LTD, enophawu lwentengiso i-CORENTRANS®, njengomthengisi oqeqeshiweyo wezixhobo zokwenza izinto zentsimbi kunye nezisombululo ezihlanganisiweyo. Ukusukela oko yasekwa ngo-2010, i-CORENTRANS ® izibophelele ekunikezeleni ngomatshini oMgangatho ophezulu wensimbi kunye nezisombululo ezihlanganisiweyo. ● Umsebenzi ...
Amaxabiso esinyithi e-China atsho ngerekhodi kwiindleko zempahla eluhlaza
Phantse i-100 yabenzi bentsimbi baseTshayina bahlengahlengise amaxabiso abo phezulu ngoMvulo phakathi kweendleko zeerekhodi zezinto ezinje ngentsimbi. Amaxabiso entsimbi anyuka ukusukela ngoFebruwari. Amaxabiso enyuke nge-6.3 yepesenti ngo-Epreli emva kokuzuza kweepesenti ze-6.9 ngo-Matshi kunye ne-7.6 yepesenti kwinyanga ephelileyo, i-accor ...
ISAZISO SOKWANDA KWENTLAWULO YOKUTHUNYELWA KWEENKONZO
ngomphathi ku 2021-05-12
UMaersk uqikelele ukuba iimeko ezinje ngeebhotile zokuthengwa kwempahla kunye nokunqongophala kwezikhongozelo ngenxa yokunyuka kwemfuno ziya kuqhubeka kude kube yikota yesine yowama-2021 phambi kokuba ibuyele esiqhelweni; Umphathi Jikelele we-Evergreen Marine uXie Huiquan ukwatsho ngaphambili ukuba ukuxinana kulindeleke ...
Yintoni iSlitting Line
ngomphathi ku 2021-04-29
Uqhoqhoqho Line, ebizwa uqhoqhoqho umatshini okanye umgca ukusika longitudinal, isetyenziselwa uncoiling, uqhoqhoqho, ukuphinda rolls zentsimbi kwiimfuno steels ububanzi. Ingasetyenziselwa ukuqhubekekisa ukubanda okanye ukutsha okushushu okusongelwe ngekhoyili yentsimbi, iikhoyili zentsimbi yeSilicon, iikhoyili zepleyiti, intsimbi engenanto i ...
IINDABA ZOKUHLOLA - IINGALOSI EZILINGANAYO / U-CHANEL PURLIN MILL
Kuba uhambo lwamazwe aphesheya aluvulekanga ngalo lonke ixesha okwangoku, umthengi uya kuhlola iimpahla ngokufumana iarhente yokuhlola yomntu wesithathu. Kwaye ngokwengxelo yokuhlola ethiwe thaca yi-arhente yokutyikitya ingxelo yovavanyo, hlela ...
Yintoni Wire Ukuzoba Machine
ngomphathi ku 2021-04-27
Umatshini wokuzoba ucingo usebenzisa iimpawu zeplastiki zentsimbi yocingo lwentsimbi, tsala ucingo lwentsimbi ngokusebenzisa i-capstan okanye i-cone pulley nge-motor drive kunye nenkqubo yokuhambisa, ngoncedo lwe-lubricant yokuzoba kunye nokuzoba kufa okuvelisa i-deformation yeplastiki ukufumana i-diamete efunekayo. ..
IINDABA ZOKUTHUMELA - TM76
ngomphathi ku 2021-04-16
Umthengisi oqeqeshiweyo wezixhobo zokwenza izinto zesinyithi. Nceda abathengi bandise izibonelelo kwaye basombulule ngokukhawuleza iingxaki zemveliso yalapha. Siye zithunyelwa umgca lokusila ityhubhu eNigeria, Turkey, Iraq, kunye Russian kule minyaka idlulileyo. Ngenxa yokunyuka kwamaxabiso esinyithi, kunye nokunyuka kwesiphumo ...
ngomphathi ku 2020-12-16
SHANGHAI COREWIRE INDUSTRY CO., LTD. imi ROOM A309, NO.7178, ZHONG CHUN ROAD, ISITHILI MIN HANG, Shanghai, CHINA. Ekuqaleni kokusekwa kwayo, inkampani yaseka iinkampani ezifanelekileyo phesheya eHong Kong. Ikakhulu ukubonelela ngoomatshini izixhobo kunye nezincedisi, izixhobo zombane ...
Inkqubo yokuHamba kweYunithi yePayipi ePhakamileyo eQhelekileyo
Izixhobo zombane ezihamba ngesinyithi ngombane ikakhulu zibandakanya i-uncoiler, umatshini wentloko othe ngqo, umatshini wokulinganisa osebenzayo, ischere ye-sheer ye-sheer, ukugcinwa kwemikhono ephilayo, ukwenza umatshini wokulinganisa, isarha yokubhabha ekhompyutheni, umatshini wentloko wokugaya, umatshini wovavanyo lwe-hydraulic, ukuhla kwe-roller, izixhobo zokufumanisa isiphene, i-baler , Mholo...
Izixhobo zombhobho ezitshisiweyo yimizi-mveliso ehlala ihleli, kwaye ilizwe kunye nabantu bayalifuna eli shishini! Kwinkqubo yophuhliso lwesizwe, imfuno yentsimbi iyanda, ngoko ke inani lombhobho wentsimbi kwinkqubo yokuvelisa intsimbi iya ikhula ngokuba nkulu. Imveliso Pipe can ...
Izinto eziluncedo Stainless Pipe Welding Machine
Umatshini wokwenza umbhobho wesinyithi osetyenziselwa ukuhambisa umbane usetyenziselwa inkqubo yokuqhubeka ngokuqhubekayo yentsimbi engenasici kunye neeprofayili zentsimbi yekhabhoni, ezinje ngeenxa zonke, isikwere, iiprofayili, kunye nemibhobho edityanisiweyo, eveliswa ngokudibanisa, ukwenza, ukuwelda i-argon arc, ukuwelda umthungo. .
Ulondolozo Stainless Pipe Ukwenza Machine
Ngophuhliso lwamashishini, ukusetyenziswa kwentsimbi yokwenza umatshini wombhobho kuya kusanda, nokuba ngaba ulondolozo lwesixhobo ngasinye endaweni, luchaphazela ngokuthe ngqo umgangatho wemveliso, kunye nobomi benkonzo yezixhobo. Yiya ...
Amaxabiso sentsimbi eTshayina spike kwi recor ...
IIMVAVANYO ZOKUHLOLA -IINGLANGI EZILINGANAYO / U-CHANEL ...